Kwiminyaka ye-Intanethi abaThengi abanakuhoywa | Martech Zone
Kwiminyaka ye-Intanethi abaThengi abanakuhoywa
Lwesine, ngoFebruwari 4, 2010 NgoMgqibelo, Novemba 28, 2015 Lorraine Ibhola
Kwiminyaka engamashumi amabini anesihlanu edlulileyo, iinkampani ezinike ukusilela ukufikelela kulindelo lwabathengi zihlala zifumana ileta enomsindo evela kumthengi. Isebe labo lenkonzo yabathengi banokungayinaki le leta, kwaye iya kuba kukuphela kwebali.
Umthengi unokuxelela abahlobo abambalwa. Ubukhulu becala, iinkampani ezinkulu ezinjengeenqwelo moya ziye zibaleke ngokuhambisa iinkonzo ezibi. Njengabathengi, sasinamandla amancinci okubenza baphendule.
Kodwa ngokufika konxibelelwano lwentlalo, iibhodi zeengxoxo, i-Twitter, kunye ne-Youtube iitafile zijikile. Ividiyo engezantsi yenye yemizekelo endiyithandayo yomthengi osebenzisa amandla akhe. I-United Airlines yonakalise isiginkci somculi uDave Carroll. Emva kweenyanga ezilithoba efuna imbuyekezo, wancama. Ubhale ingoma kwaye wenza ividiyo eye yajongwa ngaphezulu kwamaxesha angama-73 ezigidi. Ngama-41,000 okulinganisa kunye nama-25,000 amagqabantshintshi athe wakwazi ukufikelela ngaphezulu kwabahlobo abambalwa, ebonisa utshintsho kutshintsho lwamandla kumthengi.
Eli liphupha elibi kubudlelwane boluntu nenqwelomoya, kungekho ndlela yakumisa. Ukongeza kwividiyo, ndifumene uluhlu olungaphezulu kwama-70,000 kunye namakhonkco kwizithuba zebhlog nakwiindawo zeendaba kubandakanya IHotff Post kwi NY Times,
Ke kufuneka benze ntoni i-United Airlines? Inkampani enkulu iyisebenzisa njani imithombo yeendaba ukuphendula? Nje ukuba ividiyo ikhutshwe i-1,200 yeedola eyayiza kwenza ukuba ingxaki ihambe iinyanga ezintandathu ezidlulileyo, ayonelanga. Njengoko uMnu Carroll echaza: Sele ndenziwe ngumsindo ixesha elininzi kwaye, ukuba kukho nantoni na, kufuneka ndibulele uManyano. Bandinike indawo yokuyila edibanise abantu abavela kwihlabathi liphela.
Hi ndlela leyi, kuphela ngempumelelo phakathi njengemvumi, le ngoma iye yajika uMnu Carroll ibe yimpumelelo ngobusuku bonke, kunye nomsebenzi othembisayo othetha namaqela malunga nenkonzo yabathengi.
tags: udave carrollImidiya yokuncokolaunitedIindiza ezindibeneyoimanyano ikatala
Lorraine Ball Thursday, February 4, 2010 Saturday, November 28, 2015
ULorraine Ball iminyaka engamashumi amabini edibeneyo eMelika, ngaphambi kokuba abuyele ezingqondweni. Namhlanje, unokumfumana I-Roundpeg, inkampani encinci yentengiso, eseKarmele, eIndiana.
Kunye neqela elinetalente engaqhelekanga (ebandakanya iikati uBenny noClyde) wabelana ngento ayaziyo malunga noyilo lwewebhu, ukungena ngaphakathi, imithombo yeendaba zentlalo kunye nentengiso ye-imeyile.
Ukuzibophelela ekwenzeni igalelo kuqoqosho oludlamkileyo loqoqosho kwiCentral Indiana, uLorraine ujolise ekuncedeni abanini bamashishini abancinci ukuba bafumane ulawulo kuthengiso lwabo.
Kutheni uGoogle Doe engakhathali
Ukulula ngokulula sisitshixo sokuphila ngempumelelo